एसइई: आन्तरिक मूल्याङ्कनको मान्यता र ४ विकल्प – Karnalisandesh
एसइई: आन्तरिक मूल्याङ्कनको मान्यता र ४ विकल्प
प्रकाशित मितिः ३१ जेष्ठ २०७७, शनिबार १८:४५ June 13, 2020
काठमाडौँ। सरकारले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नलिने निर्णय गरेपछि विभिन्न प्रश्न उठेको छन्। गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस वर्ष नियमित एसईई परीक्षा नलिएर आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
गत चैत ६ गतेबाट सुरु हुनुपर्ने एसईई परीक्षा कोरोनाको त्रासका कारण चैत ५ गते स्थगित गरिएको थियो। जसकारण देशभरका चार लाख ८२ हजार २१९ विद्यार्थीले एसईई दिनबाट वञ्चित भए। अब उनीहरु आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट एसईईको नतिजा प्राप्त गर्ने भएका छन्।
यता कक्षा ११ र कक्षा १२ को परीक्षाबारे चासो बढ्दो रहेका बेला शिक्षा मन्त्री पोखरेलले ११ र १२ को परीक्षाको विषयमा रेडिमेड जवाफ दिएका छन्। शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले हालै रातोपाटीसँगको कुराकानीमा एसईई सधैँका लागि विद्यालयले नै लिन सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिन्छन्।
एक वर्षका लागि मात्रै गर्दा यो ब्याचका विद्यार्थीमाथि अन्याय हुने उनको बुझाइ छ। सरकारले एसईईको आन्तरिक मूल्याङ्कनको विधि के भन्नेबारे कुनै ढाँचा बाहिर ल्याएको छैन। तर डा. कोइराला भने चारवटा विकल्पबाट जान सकिने बताउँछन्।
पहिलो सम्भावना: विद्यार्थीहरुको पहिलो त्रैमासिक, दोस्रो तैमासिक, तेस्रो त्रैमासिक गरी तीनवटै त्रैमासिक क्रमशः ३०, ३० र ४० मानेर जाने एउटा तरिका हुनसक्छ।
दोस्रो सम्भवानाः शिक्षकले नम्बर गडबड गरी दिनसक्छन् भन्ने लाग्न सक्छ। प्रयोगात्मक परीक्षा भनेर २५ मा २५ हालिदिने शिक्षक साथीहरुको दुष्कर्म पनि छ। शिक्षकको चरित्र चेक गर्न दुईवटा विषयमा अनुपात यतिभन्दा फरक आयो भने स्वतः रिजल्ट खारेज हुने र विद्यार्थीलाई शिक्षकले जावाफ दिनुपर्ने भन्यो भने सन्तुलनमा नम्बर आउँछ। यतिबेला पुनर्विचार गरी पठाउनु भनेपछि शिक्षक आफै जिम्मेवार पनि हुन्छ।
तेस्रो सम्भावनाः १ कक्षादेखि एमएलाई हुने किसिमको स्तरीय परीक्षा बनाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। परीक्षा नियन्त्रणको यो स्रोत किसिमको काम हुन्छ।
चौथो सम्भावनाः हामीले एसईईका लागि प्रश्नपत्र परीक्षा केन्द्र पुर्याइसकेका छौँ। त्यो प्रश्नपत्र विद्यार्थीलाई रेडियो, टिलिभिजन वा अनलाइनमा पठाइदिने र विद्यार्थीले घरै बसेर उत्तर लेख्छ। ७ सात दिनमा समय दिऊँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो। यसरी कुनै तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ।